Maydadka Dadkii lagu laayay Bariire oo Maanta la aasay. – Hornafrik Media Network
Maydadka 10 Qof oo rayid ah oo lagu dilay Deegaanka Bariire ee Shabeelaha Hoose ayaa lagula tukaday Salaadda Janaasadda Isbitaalka Madiino ee Muqdisho, kadibna waxaa loo sameeyay Aas ay ka soo qayb galeen Dadwayne Farabadan.
Dowladda Somalia waxey qiratay in dadkii lagu laayay Bariire ay ahaayeen shacab lagu qaldamay waxeyna aqbashay iney diyo ka bixiso, sidoo kale waxey xubnihii matalaayay Dowladda ee yimid isbitaal Madiino sheegeen in la baarayo saraakiish amartay weerarkan kadibna talaabo laga qaaddayo.
Dowladdu waxey bixisay $130,000 (boqol iyo sodon kun oo dollar ) oo duug ah waxaana sidoo kale lagu heshiiyay in halkii qof ay Dowladdu ka bixiso mag dhan $70,000 (todobaatan kun oo dollar ) oo u dhiganta 100 halaad, lacagtaas waxaa lagu bixin doonaa 3 bilood gudahood oo isniinta ka bilaabaneysa.
Eheladda Dadka la laayay ayaa maalmahan oo dhan diidanaa in la aaso Maydadka 10 Qof ee lagu dilay Bariire, balse is faham iyo wadahadal ay ugu dambayn Dowladda Somalia ka garaabtay wixii dhacay waxay sababtay in la aaso Maanta Mayadka Dadkaasi Rayidka ah.